Thwebula Datacol 7.14 – Vessoft
Ikhasi elisemthethweni: Datacol
Datacol – ithuluzi elinamandla ngokuzenzakalelayo search, inqubo kanye nokuqapha esiningi ulwazi ku-inthanethi. Isofthiwe lula kakhulu umsebenzi yomsebenzisi by automating Imisebenzi Eminingi isimiso, ukuqapha kanye ukuhlaziya of sites ezidingekayo, ukucinga kanye ukubuthwa oxhumana abathengi ezingase zivele, njll Datacol kwenza ukusindisa idatha ku Excel, CSV, WordPress, Blogspot, DLE noma Ucoz. Isofthiwe ikuvumela ukuba bandise amakhono ngokufaka inombolo enkulu izithasiselo.
Automation of search kanye information processing
Yonga idatha etholwe takhiwo ehlukahlukene
Inani elikhulu izithasiselo
Le software idinga .NET Framework ukugijima kahle
Amazwana ku Datacol
Datacol software ehlobene
I-Internet Explorer – isiphequluli esiyisisekelo sohlelo olusebenza olusuka kuMicrosoft. Isoftware ifaka iqoqo lamathuluzi wokuhlala ntofontofo ku-inthanethi.
I-FlashGet – umphathi onamandla wokulanda amafayela ku-inthanethi. Isoftware isekela imigomo eyahlukahlukene futhi ihlinzeka nge-antivirus scan yamafayela alandiwe.
Ingxoxo ekahle futhi Amatebhe ukuxhumana on inethiwekhi wendawo noma internet. Isofthiwe inikeza ezingeni eliphezulu of ukuvikelwa ukuze avimbele ukuvuza idatha.
Umbuso ukuvikela amafolda futhi amafayela usebenzisa iphasiwedi benethuba wokusungula amazinga ehlukene ukuvikelwa. Isofthiwe ivikela ulwazi kusuka kucis ngengozi futhi virus ukutheleleka.
Ithuluzi ukuze kusheshiswe ukulayisha uhlelo lokusebenza. Isofthiwe ikuvumela ukwandisa ukusebenza kanye ukubona izingxabano phakathi izinqubo noma amasevisi.